On sept 24, 2019 9 836
Sary: Infocom Seg
Anatin’ny ezaka mamerina amin’ny laoniny ny fandriampahalemana ao amin’ny distrikan’i Betroka ankehitriny ny zandarimariam-pirenena. Tafaverina tamin’ny tompony, omaly, ny omby miisa 100. Mbola nahazo basim-borona iray ihany koa izy ireo. Niampy dahalo efatra maty voatifitra, nandritra ny fifandonana. tafaporitsaka kosa, nandritra ny ora fifampitifirana ny dahalo maherin’ny 40.
Tsiahivina fa avy nanafika sy ngalatra omby tao amin’ny Fonkotany Ambiromena, Kaominina Ambatoloahy Distrikan’Ihosy, Faritra Ihorombe ireo olon-dratsy ny faran’ny herinandro lasa teo. Saika hampidirina tao amin’ny Vohitra Marohary, Kaominina Kelivaho ny omby halatra.
Naharay antso, ny avy eo amin’ny kaompania zandariamaria, Betroka ka nandefa zandary avy hatrany hanakana azy ireo. Nisy ny fifampitifirana satria nanohitra ny zandary sy mpanara-dia ny olon-dratsy.
Taorian’izao vokatra izao, nisy ny resaka nifanaovan’ny zandary notarihin’ny lietnà, Yves Marcel Maminirina Randriamanantena , lefitry ny kaomandin’ny zandary kaompania Betroka., tamin’ny mpanao gazety tao an-toerana. Nambarany tamin’izany fa: » Namonjy avy hatrany ny toerana , efa fantatra fa tsy maintsy ho lalovan’ny omby sy ny dahalo ny miaramilanay tao amin’ny Poste Avancée Kelivaho. nanatevin-daharana azy ireo kosa ny avy ao amin’ny kaompania. Naharitra adiny roa mahery ny fifampitifirana. Rehefa ara-potoana ny fampandrenesana ny mpitandro filaminana avy amin’ny olona lasibatra dia ahitam-bokatra tsara tahaka izao. Izya no hanaovanay antso avo amin’ny fokonolona mba tsy hiandry ny fiantsoana zandary. », hoy izy.
Nohamafisiny ihany koa fa fotoana, mampirongatra ny asan-dahalo ny vanim-potoana tahaka izao ka mahatonga azy ireo, hametraka paikady vaovao ho entina miatrika izany, mba ho fiarovana hatrany ny vahoaka sy ny fananany.
CLIMAT DES AFFAIRES: MADAGASCAR EST FAVORABLE POUR LES INVESTISSEURS